Yintoni uyilo lomzobo wedijithali? | Abadali be-Intanethi
UMary Rose | | Idizayini yeMifanekiso
La yokungenisaancia del isifohayi gráfico, en el iyunifomuo ngokwenene, es un unayoa que Está en bwashington de ukubado el iyunifomuo. Y hayi es for abantuos, ya que, en la ngokweneneinto, iinkampani, iimpawu, imibutho kunye namaziko anika ingqwalasela ngakumbi nangakumbi kuyilo lwegraphic, y unyana kakhuluas las umntuas que se idedndinga nge utitshalaesyodwainto y idedicAngleivuliwe a enye icandelo.
Uyilo lweGraphic licandelo apho, ngakumbi nangakumbi, umsebenzi weengcali kunye nabafundi kulo mmandla uyimfuneko, ekubeni, ngokunyuka, amajelo eendaba, iintengiso, iiblogi, izicelo zewebhu kunye nothungelwano phakathi kwabanye, ziba ziphila ngakumbi kuluntu. Kwi Isichaziitudoti, uyilo lwegraphic luyanda kubomi bethu bemihla ngemihla, kwaye oku kusikhokelela ekubeni sigqibe kwelokuba ukubaluleka kwayo kubomi bethu kuyanda. Kule post siza kuchaza ukuba yintoni uyilo lwegraphic digital; kwaye siza kukubonisa umahluko ophambili kunye noyilo lwegraphic lwakwantu.
1 Yintoni uyilo lomzobo wedijithali?
2 Umahluko phakathi koyilo lwegraphic kunye noyilo lwegraphic graphic
2.2 Abaphulaphuli ekujoliswe kubo
2.3 Ifom yokusebenza
2.4 Amathuba omsebenzi
Uyilo lwegraphic digital kusetyenziso lwe izakhono zeteknoloji kunye nezixhobo zoyilo lwedijithali kumfanekiso, otros Iinjongoetos y umbhaloo usNdihamba ngenyawo iikhomputha. Olu qeqesho loyilo lugxile kuyilo lwegraphic media yedijithali. Olu yilo luye lwaba ludumo ngenxa yamaphepha ewebhu, iiblogi kunye neenethiwekhi zentlalo. Ewe, kulapho abayili begraphic banokubonisa umsebenzi wabo kwaye banxibelelane nabathengi kunye neenkampani zomsebenzi wexesha elizayo.
En años Recintoes, el isifohayi gráfico yedijithali ha ungenerkokuchitha kakhulua ethandwayointo, y la Versatilinto de las aphai-ramintoas yedijithalies ha imvumeumkile que se desarindimale una nueva áisizathu del isifohayi gráfico. Apho Los proyectos pueden lumlenzear a ukuba yenenengqondwenie dalaivos. Ekuqaleni, uyilo lomzobo lwaluthathwa njengomsebenzi oquka ukwanelisa iimfuno zabathengi. Nangona kunjalo, namhlanje le nkcazo itshintshile. Namhlanje, ugxile ekusombululeni iingxaki zonxibelelwano kunye nemingeni.
DifUErencias yomzalire isifohayi gráfico y isifohayi gráfico yedijithali
En un umgaqoio se han uskokuchitha las imfumbaabi-ras isifohayi gráfico y isifohayi itshathi yedijithali for Isichaziir la ngokufanayoa utitshalaiqabaneivuliwe. despuewe, nge el paso del tohpo, han aparecumkile otras que han hecho que se difUErencien. por ejemplo, uyilo lwegraphic luqeqesho lobugcisa olusekwe kwinkqubo yokuyila. por oiTro lkokuchitha, el uyilo lomzobo wedijithali bubuchule bokuyila obusekwe kusetyenziso lwemidiya yedijithali.
Ngamafutshane, uyilo lomzobo ngokwalo luyindalo yobugcisa, ngelixa uyilo lwedijithali bubuchule obusekelwe ekusebenziseni izixhobo zedijithali. Eyona nto itshintsha kakhulu sisiphakathi. Ukongeza, kukho iiyantlukwano ezine ezicacileyo phakathi kwazo:
Kuyilo lwegraphic lwemveli, sifumana print media. Ke ngoko, enye yezona nkxaso ziphambili liphepha, nokuba lelentengiso eprintiweyo, iintengiso okanye iikhathalogu. Kolu shicilelo, imo yombala ngaphandle kwedijithali iyafuneka kwaye yiCMYK. Kolu hlobo, abaqulunqi banokuvavanya ukuprinta ukuqinisekisa ukuba banemibala echanekileyo.
Ngelixa eyedijithali, imo yombala yiRGB. Ekubeni basebenza kunye nezixhobo zedijithali kunye neenkqubo, kwaye iimonitha kufuneka zilinganiswe ukuze kungabikho iimpazamo ezizayo ekuboneni umsebenzi.
Akunjalo ukutsala abaphulaphuli abatsalwa kumajelo eendaba ngokwasemzimbeni kunezedijithali. Owokuqala kufuneka enze imbonakalo entle yokuqala ukuzama ukutsala uluntu nokubamba ingqalelo yabo. Imizuzwana kufuneka yenze abaphulaphuli ojolise kubo banikele ingqalelo kowona mgangatho uphezulu. Ukuze batyelele iiwebhusayithi zabo, iinethiwekhi zentlalo okanye iiblogi ukuze bagqibe ukuthenga iimveliso okanye iinkonzo zabo.
El isifohayi gráfico yedijithali ha czombiniikokuchitha yi gqibezelaukuba la Ndodaxesha en que Los isifoñadiintsimbi gráficos trabajan. Kweli xesha litsha loyilo lwegraphic, abayili begraphic akufuneki bachithe ixesha elininzi besebenza ephepheni, kuba umsebenzi wenziwa ngokuthe ngqo kwiscreen sekhompyuter. Ngokwemveli, abayili begraphic bayila ephepheni nakwipensile.
Ukubonakala kobuchule bedijithali kuye kwatshintsha indlela abasebenza ngayo. Iinkqubo zesoftware ezifana neAdobe suite (Illustrator, Photoshop, Ngenisa…). Kwimidiya yedijithali, kufuneka usebenze ngobungakanani obuchazwe kwangaphambili ukuze ulungelelanise neemfuno zezicelo, iiwebhusayithi kunye neentengiso zedijithali.
Bobabini abaqulunqi banemfuno enkulu namhlanje kwimarike yomsebenzi. Ngokuxhomekeke kubuchwephesha, abayili begraphic bemveli baya kugxila ngakumbi ekusebenzeni kwiinkampani ezizinikele kumajelo oshicilelo. Ngelixa abaqulunqi bemizobo yedijithali baya kukufanelekela ngakumbi ukusebenza kwiinkampani zedijithali, ezinje ngeearhente zentengiso yedijithali, izitudiyo zokuyila, njl.
El trabigalikhi efunekayoizolo de dalaividad, así que Esto lo hi-eyisi un puEsto sebenzi que puede lumlenzear a ukuba muy ukuthandaukubangaphambili. Ukuba into oyifunayo ngumsebenzi oguquguqukayo kakhulu kunye noluhlu olubanzi lwamathuba ophuhliso, ngaphandle kwamathandabuzo le yeyakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Idizayini yeMifanekiso » Yintoni uyilo lomzobo wedijithali?